Ramos: Messi anigaa kaga horeeyay dabaaldegii uu sameeyay kulankii Celta Vigo | TOP NEWS
Ramos: Messi anigaa kaga horeeyay dabaaldegii uu sameeyay kulankii Celta Vigo
By Mohamed Abdulle Hassan on March 9, 2017 No Comment
Sergio Ramos ayaa shaaca ka qaaday inuu ku garaacday Lionel Messi ‘isoo wac’ dabaaldagaan, ayuu kusameeyay xidiga Real Madrid ciyaartii koob ka Champions League ee xalay.
Xidiga kabtanka u ah kooxda Real Madrid Sergio Ramos ayaa qeexay dabaaldagiisii uu ku dabaaldagay kooxda Napoli ee ‘isoo wac’ inuu asaga ku horeeyay, wuxuu sheegtay inuu kaga horeeyay ciyaaryahan Lionel Messi.
Messi ayaa dad badan ka yaabsaday kasoo sameeyay dabaaldaga ‘isoo wac’ dabaalgaan ayuu sameeyay kadib markii uu u dhaliyay gool kooxda Barcelona ciyaartii ay ku xaaqday 5-0 kooxda Celta Vigo kulan katirsanaa LaLiga sabtidii.
Waxaa la rumeysan yahay Messi inuu yahay qofkii ugu horeeyay ee sameeyay laakiin ninkaan ayaa sidaa si lamid ah sheegtay, waxaa lasheegay xaaladda kooxda iyo qandaraaskiisa inuu kaga hadlaayay, inkastoo Messi uu markii dambe sheegay inuu ula jeeday adeerkii.
“Waxaan sameeyay dabaaldaga Messi kahor,”waxaa sidaa yiri Sergio Ramos kadib guushii talaadadii lasoo dhaafay.
“Waxaan ku sameeyay garoonka Camp Nou.”
ugu danbayn xidigaan ayaa sheegay inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee sameeyay dabaaldagaan.
Ramos: Messi anigaa kaga horeeyay dabaaldegii uu sameeyay kulankii Celta Vigo added by Mohamed Abdulle Hassan on March 9, 2017